Mikel Arteta oo farriin adag u diray dhammaan xiddigaha kooxda Arsenal – Gool FM
Mikel Arteta oo farriin adag u diray dhammaan xiddigaha kooxda Arsenal
(London) 24 Dis 2021. Tababaraha Arsenal ee Mikel Arteta ayaa carabka ku adkeeyay in xiddigaha Gunners looga baahan yahay in ay u hoggaansamaan sharciga kooxda si ay u ilaashadaan booskooda kooxda.
Mikel Arteta ayaa go’aansaday in uu calaamada kabtanimada Arsenal ka qaado bishan xiddiga heerka caalami dalka Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang sababo la xidhiidha in uu fasax la’aan kaga maqnaaday tababarka kooxda.
Haddaba sida laga soo xigtay shabakada Goal Mikel Arteta ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay arrinta ku saabsan Aubameyang, wuxuuna yiri:
“Waxaan kaliya codsanayaa hal shay, ixtiraam iyo ballanqaad, haddii taasi dhici weysana, waxaan xir xiran doonaa boorsooyinkeyga waxaana aadi doonaa meel kale, sababtoo ah taasi waa waxa ugu yar ee aan codsan karo.”
“Waxaan taas ka filan lahaa qof kasta oo ka shaqeeya kooxda, marka hore aniga qudhayda, maalinka aan sidaas sameynin, waan bixi doonaa si aan u qabto shaqo aan ahayn tababarenimo.”
“Si aad u guulaysato, waa inaad yeelato go’aan, oo aad matasho koox heerkan ah, taasi waa heerka ugu hooseeya ee ay tahay inaad sameyso.”
“Si adag ulama dhaqmin Aubameyang, laakiin waxaan filayaa in isaga iyo ciyaartoyda oo dhan ay u hoggaansamaan go’aammada kooxda, sababtoo ah ma ihi kaligii taliye.”